मृगौलालाई नराम्रो असर गर्ने युरिक एसिड, कसरी गर्ने नियन्त्रण? « AayoMail
मृगौलालाई नराम्रो असर गर्ने युरिक एसिड, कसरी गर्ने नियन्त्रण?
2021,17 August, 8:20 am
काठमाडौं – अचेल मानिसमा युरिक एसिडको समस्या बढ्दै गइरहेको छ। शरीरमा युरिक एसिड तब बढ्छ, जब मृगौलाले एसिडलाई राम्ररी छान्न सक्दैन।
किड्नी अथवा मृगौलाको काम भनेको युरिक एसिडलाई फिल्टर गरेर पिसाबको माध्ययमबाट बाहिर निकाल्नु हो। तर, जब शरीरमा युरिक एसिड धेरै हुन थाल्छ, किड्नीले धेरै छान्न सक्दैन। जसले गर्दा रगतमा एसिडको मात्रा बढ्न थाल्छ।
मानिसले जानकारीको अभावमा सामान्य लक्षणहरु नजरअन्दाज गर्दछन्। यसैकारण युरिक एसिड बढेर कयौं स्वास्थ्य समस्याहरु उत्पन्न हुन्छ। यसका कारण हड्डी तथा जोर्नीमा समस्या हुनसक्छ।
स्वास्थ्य विज्ञहरुका अनुसार युरिक एसिड एक प्रकारको प्राकृतिक फोहोर हो जुन शरीरमा हरेक दिन उत्पादन हुन्छ। यो प्युरिन नामक केमिलकबाट बन्छ, जुन प्राकृतिक कोषिकाहरु टुक्रेपछि उत्पन्न हुन्छ। महिलाहरुका लागि सामान्य युरिक एसिडको स्तर २-६ हुन्छ भने पुरुषहरुका लागि लगभग ३-७ हुन्छ।
विज्ञहरुका अनुसार धुम्रपान, मद्यपान तथा लामो समयसम्म बसिरहँदा शरीरमा युरिक एसिड बढ्न थाल्छ। युरिक एसिड बढे जोर्नीमा समस्या हुने, सुन्निने, हिँड्न गाह्रो हुने र पथ्थरीसमेत हुन सक्छ।
युरिक एसिड बढ्नबाट रोक्न यी खानेकुरामा ध्यान दिनुस्-
आफूलाई सधैं हाइड्रेट राख्नुहोस् – आफूलाई हाइड्रेट राखे एसिड लेवल नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। हरेक दिन ८ देखि १० गिलास पानी पिउनुपर्छ। हरेक दिन ताजा फलफूल खानुपर्छ। केरा खानाले सुन्निने समस्या कम हुन्छ।
ओखर – हरेक दिन ओखर खाए युरिक एसिड नियन्त्रणमा आउँछ भने मेवा खाँदा पनि एनर्जेटिक हुन्छ।
दुग्धजन्य खानेकुरा – दुध, दही, मोही खाए युरिक एसिड नियन्त्रणमा आउँछ। हरेक दिन दुधसँग किसमिस मिसाएर खाए युरिक एसिड नियन्त्रणमा आउँछ।
दाल – दालमा भरपुर मात्रामा प्रोटीन हुन्छ। आफूलाई मनपर्ने जुनैपनि दाल खाँदा पनि फाइदाजनक नै हुन्छ।
नियमित व्यायाम – हरेक दिन व्यायाम गरे युरिक एसिड कम गर्न मद्दत हुन्छ। हरेक दिन ३० मिनेट व्यायाम गर्न जरुरी हुन्छ। सुत्नु अगाडि बेसार हालेको दुध खानु उपयुक्त हुन्छ।
केचअप, प्याक गरेका जुस, चक्लेट, चिप्स, बिस्कुट खानुहुन्न। यसको सेवनले युरिक एसिड धेरै बढाउँछ।